Ugly mandarina -China Yixinhe Trading
Shiranui Ugly Orange fantatra ihany koa Anarana iombonana amin'ny ratsy tarehy, ratsy tarehy hafahafa, 2 isan-taona ny 3 volana matotra, marefo hena sy mora Peel, miaraka Ponkan ankasitrahana, tsy mitsinkafona hoditra. Nofo voasary, matsiro malefaka sy be ranony no maivam-boa sy malefaka manda. Nampidirin'i Fujian ho any Sichuan, io karazana no lafo indrindra Citrus karazany ao amin'ny tsena Shinoa. Voankazo ranom siramamy 13-14 ambaratonga, ny asidra matotra dia tokony ho ny 1%, tsara tsirony, tsara toetra.
Shiranui Ugly Orange voankazo endrika sy ny voankazo dia tsy manana raikitra haben'ny endrika, voankazo toy ny Sanbao Anarana iombonana, dia misy vozony fohy malaza, tsy misy fohy tendany, tsy misy vozony fisaka voa amin'ny tadim indrindra. Yellow Peel voasary, mandoko tamin'ny tapaky ny volana Oktobra, fandokoana manontolo ny voalohandohan'ny Desambra. Yellow Peel, matevina 3.5-5mm. Voankazo masaka Peel marokoroko kely. Mora Peel, miaraka Ponkan ankasitrahana, tsy mitsinkafona hoditra. Nofo voasary, matsiro malefaka sy be ranony, ny rindrina dia tena manify sy malefaka, tsiro miavaka. Voankazo ranom siramamy mari-pahaizana ambaratonga 13-14. Tsy mitovy fambolena, ihany koa dia afaka hatramin'ny 16 degre. Matotra asidra dia mikasika ny 1%. Fahamatorana fe-potoana 2-3 volana, mijanona vaovao ny afovoan'ny faramparan'ny Aprily, tsara tsirony, tsara toetra.
Shiranui Ugly Orange manan-karena amin'ny vitaminina C, ary mamantatra zavatra fa ny vatan'olombelona needs.Per 100 grama 36,89 misy kaloria, 9,02 grama ny carbohydrate, 0 matavy, 0,82 grama ny proteinina, 1,64 grama ny cellulose.Nutritional sarobidy dia avo lavitra noho ny toy izany koa fruit.Shiranui Ugly Orange afaka manampy mamokatra rora sy slake hetaheta amin'ny avo sarobidy sakafo, fanafody avo vidy, dia voa tsara amin'ny vidiny sivily. Ugly volomboasary Peel dia mety ho fanafody rehefa maina, ary napetrany tao amin'ny vata fampangatsiahana mety ho deodorant.
Manaraka: Spring Jereo ny Citrus
China Shiranui mandarina
Wholesale Shiranui mandarina